Ukuxelela Isifundo Sexesha Ngee-Worksheets
Sebenzisa ama-worksheets kunye nezinye izixhobo zokunceda abantwana bafunde ixesha lokuxelela
Abantwana bafunda ukuxelela ixesha ngokuqala okanye kwibakala lesibili. Le ngcamango ingabonakali kwaye ithatha imfundiso ebalulekileyo ngaphambi kokuba abantwana bakwazi ukuqonda ingcamango. Ungasebenzisa amanqaku amaninzi ekuncedeni abantwana ukuba bafunde indlela yokumela ixesha kwiwashi kunye nendlela yokuchaza ixesha kwiwashi ze-analog ne-digital.
Ingqiqo yexesha ingathatha ixesha lokuqonda. Kodwa, ukuba usebenzisa indlela yokuthetha ngokucacisa indlela yokuxelela ixesha elingakanani, abafundi bakho bayakuyicoca ngokusebenza.
Iiyure ezingama-24 ngosuku
Into yokuqala eya kunceda abafundi abaselula ukuba bafunde malunga nexesha ukuba ngaba uchazela kubo ukuba kukho iiyure eziyi-24 ngosuku. Cacisa ukuba iwashi lihlula imini ibe ngama-halves ama-12 iiyure nganye. Kwaye, ngeyure nganye, kukho imizuzu engama-60.
Ngokomzekelo, unokuchaza ukuba kukho i-8 yintsimbi ekuseni, ngathi xa abantwana bekulungele isikolo, kunye ne-8 ntambama ebusuku, ngokuqhelekileyo banxulumene nexesha lokulala. Bonisa abafundi ukuba iwashi ibukeka njani ngo-8 ngentsimbi nge-clock okanye enye insiza yokufundisa. Buza abantwana ukuba i-clock ibonakala njani. Buza ukuba baqaphele malunga newashi.
Chaza abantwana ukuba iwashi inobuso kunye nezandla ezibini ezibalulekileyo. Utitshala kufuneka abonise ukuba isandla esincinci simelela iyure yomhla ngelixa isandla esikhulu sibonisa imizuzu ngelo lixa. Abanye abafundi banokuba sele beyifumene nombono wokweqa ukubalwa ngama-5s, okufuneka kube lula kubantwana ukuba baqonde umxholo wenani ngalinye ngelixa elimele ukunyuka kwemizuzu emi-5.
Cacisa indlela ezili-12 eziphezulu ngayo iwashi kokuqala nokuphela kweyure nendlela emele ngayo ": 00." Emva koko, yenza iklasi ukubala amanani alandelayo kwixesha, ngokudlula ukubalwa ngama-5, ukusuka kwi-1 ukuya kwe-11. Chaza indlela inqaku elincinci elingaphakathi kwamanani kwixesha liyimaminithi.
Buyela kumzekelo we-8 ntsimbi.
Cacisa indlela "inxalenye" ​​ithetha ngayo imizuzu emibini okanye: 00. Ngokuqhelekileyo, ukuqhubela phambili kokuhamba phambili ekufundiseni abantwana ukuxelela ixesha kukuqala ngokunyuka okukhulu, njengokuba uqala ngabantwana kuphela ukuchonga iyure, uze uhambe kwisiqingatha seyure, emva kwekota yeeyure, kwaye emva kwemizuzu emi-5.
Iiform Worksheets for Time Time
Emva kokuba abafundi baqonde ukuba iyure elincinci lesandla limele umjikelezo weeyure eziyi-12 kunye nomzuzu wesigxina kumanani angama-60 ayingqayizivele malunga nobuso bewashi, bangaqala ukuzisebenzisa ezi zakhono ngokuzama ukuxela ixesha kwiifom zokusebenzela ezihlukeneyo.
Iifowuni ezingakhange zikhethiweyo
Ukuxelela ixesha kwiimitha ezi-5 eziseduze
Ukuxelela ixesha elifutshane kumzuzu
Amaphepha amaxwebhu amabini okugcwalisa amaxesha angamaxesha: Iphepha lokusebenzela 1 kunye nephepha lokusebenzela 2
Gcwalisa amaxesha adijithali kumawashi e-analog
Amaxesha okusebenzela amaxesha ahlukeneyo
Ezinye iiNsiza zokufundisa
Ukubandakanya iingqondo ezininzi ekufundeni kuncedisa ukuxhasa ukuqonda nokubonelela ngeendlela zokuphatha kunye nezama-izandla kumava okuphucula amava okufunda.
Kukho iindidi ezininzi zeeplastiki ezikhoyo ukuze kuncede abantwana bafunde iikhontrakthi zexesha. Ukuba awufumani iwashi zeplastiki ze-mini, yenza abafundi bakho benze iiwashi zamaphepha usebenzisa i-clipfly. Xa umntwana unexesha lokusebenzisa, unokucela ukuba akubonise amaxesha amaninzi.
Okanye ungazibonisa ixesha ledijithali uze ubacele ukuba bakubonise oko kubonakala ngathi kwiwashi ye-analog.
Ukubandakanya iingxaki zengqondo kwimisebenzi yokuziphatha, njengokuba kungoku-2 ntsimbi, liza kuba lixesha lini kwisiqingatha seyure.
Amaqabane amanga: 'Okwangoku' kwaye 'Enyanisweni'
Ukuthenga iRacket yeTennis yokuLungela kweGreyati yoMdlali
Ukuphelisa Intlungu Yakho Ngeengqungquthela Zothando
Izwe lomculo i-Halloween Costume Iingcinga
IiNtebe ezingenabulungisa ngesiNgesi